कोरोनाको मुख्य प्रकोप सकियो, नोबेल विजेता वैज्ञानिकको दावी , हेराै बिस्तृतमा — Imandarmedia.com
१सन्दीप लामिछाने बने टी-२० मा सय खेल पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी
२किन नेकपा एमाले कार्यालयबाट बालिका खड्का पक्राउ गरियो ?यस्तो छ कारण
३जिल्ला, हुम्लामा वैशाखमा पनि हिमपात, स्थानीय दंग
४कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा वैद्यले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?
५ओली भनछन् : गल्ती महसुस गरेर आए पार्टीमा काम गर्ने अवसर दिइन्छ।
६नयाँ वर्षको बजेटमा कृषकका सुविधामा कति कटौती गरियो ?
७संसदीय इतिहासमा नभएको काम माधव नेपालबाट भयो :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
८कोठा नम्बर ९०१ को बैठकमा ओलीले माधव नेपाललाई के भने ? भयो यस्तो खुलासा
९मौसमबारे आयो यस्तो नयाँ अपडेट, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ पानी ?
१०नेकपा स्थापना दिवस- यस्तो छ जुट र फुटको श्रृंखला
११‘नेपाल सुपरलिग’को मेडिकल पार्टनरमा हस्पिटल, खेलाडीले पाउनेछन् यस्ता सुविधा
१२आइपिएल : हैदरावादको चौथो खेलमा पहिलो जित
८भोलिदेखि सबै शिक्षण संस्था बन्द, आकष्मिकरुपमा ओली सरकारले किन गर्यो यस्तो निर्णय ?
१०३ बुँदे सहमति उल्लंघन गर्दै ओली सरकारद्वारा नेकपा नेता गिरफ्तार
११नेपालमा कहिलेदेखि हुँदैछ लकडाउन ? मन्त्रिपरिषद् बैठकले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय
कोरोनाको मुख्य प्रकोप सकियो, नोबेल विजेता वैज्ञानिकको दावी , हेराै बिस्तृतमा
काठमान्डाै । नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित तथा स्टेनफोर्ड बायोफिजिसिस्ट वैज्ञानिक माइकल लेविटका अनुसार विश्वमा कोरोनाभाइरसको सबैभन्दा ठूलो प्रकोप समाप्त भइसकेको छ । उनका अनुसार कोरोनाभाइरसबाट जतिसम्म खराब अवस्था हुन सक्थ्यो त्यो भइसकेको छ अव विस्तारै यसमा सुधार हुँदै जानेछ । लस एन्जल्स टाइम्ससँग कुरा गर्दै वैज्ञानिक लेविटले भने ‘वास्तविक स्थिति त्यति भयावह छैन जति भयावह हुने आशंका गरिएको थियो ।’ जताततै डर र चिन्ताको माहोलमा लेविटको यो भनाइले धेरै आशाको संचार गरेको छ ।
उनको बयान यसकारण पनि अहम छ किनकि यसअघि चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण र यसको नियन्त्रणका विषयमा उनले एकदमै सटिक भविष्यवाणी गरेका थिए । विश्वभरीका तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले चीनलाई कोरोनाभाइरसमाति नियन्त्रण पाउन निकै लामो समय लाग्ने बताइरहँदा लेविटले यसबारे एकदमै सटिक आँकलन गरेका थिए । लेविटले फेब्रुअरीमा लेखेका थिए ‘हरेक दिन कोरोनाका नयाँ मामिलामा गिरावट देखिएको छ । यसबाट यो साबित हुन्छ कि आगामी हप्तामा कोरोनाभाइरसबाट हुने मृत्युको दर घट्न थाल्नेछ ।’
ठ्याक्कै उनको भविष्यवाणी अनुसार हरेक दिन मृत्युको संख्याकमा कमी आउन थाल्यो । विश्वको अनुमानको विपरित चीन छिटै कोरोनाभाइरसमाथि नियन्त्रण पाउँदै फेरि उठ्यो । दुई महिनाको लकडाउनपछि कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित हुबेइ प्रान्त पनि खुलेको छ । लेविटले चीनमा ८० हजार संक्रमण र ३२ हजार ५ सय मृत्युको अनुमान गरेका थिए जबकि अन्य विशेषज्ञले लाखौंमा अनुमान गरेका थिए । लेविटको भविष्यवाणी आजसम्म आइपुग्दा एकदमै सटिक छ ।
अहिले लेविटले पूरै विश्वमा समेत चीनको जस्तै ट्रेण्ड देखिने भविष्यवाणी गरेका छन् । अहिले ७८ देशमा हरेक दिन कम्तीमा ५० नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । यो तथ्यांकको विष्लेषणपछि लेविटले अधिकांश देशहरुमा प्रकोपमा कमी आएको संकेत देखिएको बताएका छन् । उनको गणना हरेक देशमा देखिइसकेका संक्रमितको आधारमा नभइ नयाँ थपिएका संक्रमितको संख्यामा आधारित छ । लेविटले भने ‘चीन र दक्षिण कोरियामा नयाँ संक्रमणका केस लगातार घटिरहेका छन् । आँकडा अहिले पनि चिन्ताजनक छ तर यसमा वृद्धिदरमा लगातार गिरावट आइरहेको प्रस्ट संकेत देखिएका छन् ।’
वैज्ञानिक लेविट यो कुरा पनि मान्छन् कि आँकडा अलग हुन सक्छन् र कैयौं देशबाट आधिकारिक आँकडा यसकारण धेरै कम छन् किनकि त्यहाँ परीक्षण कम भइरहेका छन् । यद्यपि उनी मान्छन् कि अधुरो आँकडाका बावजुद लगातार गिरावटको यहप् अर्थ हो कि केही छ जले काम गरिरहेको छ र यो केवल अंकको खेल होइन । उनको यो निष्कर्ष विश्वभरका मानिसहरुको लागि आशाको किरण बनेर आएको छ ।
लेविट सबै देशबाट कोरोनाभाइरसलाई जरैदेखि समाप्त पार्ने विषयमा पनि जोड दिन्छन् । उनका अनुसार सामाजिक दूरी सबैभन्दा जरुरी छ, खासगरी यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि ठूलो संख्यामा मानिसहरु एक ठाउँ जम्मा नहोउन् किनकि अधिकांश मानिसहरुमा यो भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता नै छैन र भ्याक्सिन बन्न अझै लामो समय लाग्नेछ । उनका अनुसार लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि सुरुवातमै संक्रमितको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि केवल परीक्षणले चल्दैन । यसका लागि बडी टेम्प्रेचर सर्भिलांसको आवश्यकता छ जो चीनले लागू गरिरहेको छ र सुरुवातमै सोसल आइसोलेसन गरिरहेको छ ।
उनका अनुसार इटलीको भ्याक्सिन विरोधी मानसिकता नै शायद बलियो कारण थियो जसका कारण यहाँ भाइरस यति तीव्र रुपमा फैलियो । फ्लु विरुद्ध भ्याक्सिन लिनु जरुरी छ किनकि फ्लुको महामारीका बीच कोरोनाले नराम्रोसँग आक्रमण गर्न सक्छ र अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न सक्छ । लेविटले तनाव नियन्त्रण सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको भनेका छन् । २०१३ मा रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार जित्ने लेविट कोरोनाभाइरसबाट सुस्त भएको आर्थिक प्रगतिका विषयमा धेरै चिन्तित छन् ।
जिल्ला, हुम्लामा वैशाखमा पनि हिमपात, स्थानीय दंग
नयाँ वर्षको बजेटमा कृषकका सुविधामा कति कटौती गरियो ?
संसदीय इतिहासमा नभएको काम माधव नेपालबाट भयो :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
कोठा नम्बर ९०१ को बैठकमा ओलीले माधव नेपाललाई के भने ? भयो यस्तो खुलासा
मौसमबारे आयो यस्तो नयाँ अपडेट, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ पानी ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भन्यो- संक्रमण दर अत्यधिक बढेको छ, अत्यावश्यक नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कनू
ओलीलाई काउन्टर दिन खनाल-नेपाल समूहले चाल्यो यस्तो कदम, बालुवाटारमा हलचल
एकैदिनमा थपिए २३५१ कोरोना संक्रमित, काठमाडौँमा मात्रै यति धेरै
ओलीलाई तह लगाउन प्रचण्डले पाए यस्तो बिशेष अधिकार, धुम्बाराहीदेखि बालुवाटारसम्म हलचल
अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाउने-सर्वोच्चको आदेश